NgeSonto, ngoFebhuwari 21, 2021 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 23, i-2021 Douglas Karr
Ngenkathi imithethonqubo yokutholakala kwesiza ibilokhu ikhona iminyaka, izinkampani bezephuza ukuphendula. Angikholwa ukuthi yindaba yozwela noma ububele ngasohlangothini lwezinkampani… Ngikholelwa ngokweqiniso ukuthi izinkampani zilwela nje ukuhambisana.
Isibonelo, Martech Zone ibalwa kabi ngokufinyeleleka kwayo. Ngokuhamba kwesikhathi, bengisebenza ukuthuthukisa kokubili ukufaka amakhodi, ukuklama, nemethadatha edingekayo… kepha angikwazi ukuhambisana nokugcina okuqukethwe kwami ​​kusesikhathini futhi ngishicilela njalo. Anginayo imali engenayo noma abasebenzi okufanele ngiqhubeke phambili kukho konke engikudingayo ukuze ngivele… ngenza konke okusemandleni ami.
Angikholwa ukuthi ngihlukile lapha… empeleni izinombolo ziyashaqisa lapho uhlaziya iwebhu nokwamukelwa kwayo kwamazinga wokufinyeleleka:
Tags: acessibeIsihloko se-ADA IIIaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukufinyeleleka kokuzwaukukhubazeka kwezindlebeukufinyeleleka kwengqondoukukhubazeka kwengqondoukufinyeleleka kolimiukukhubazeka kolimiukufinyeleleka kwemizwaukukhubazeka kwezinzwaukufinyeleleka ngokomzimbaukukhubazeka ngokomzimbaIsigaba 508ukufinyeleleka kwenkulumoukukhubazeka ekukhulumeniukufinyeleleka okubonakalayoukukhubazeka okubukwayowcagI-WCAG 2.1ukufinyeleleka kwewebhuimihlahlandlela yokufinyeleleka kokuqukethwe kwewebhu